भाइरल बालगायक सचिन परियारको नया म्युजिक भिडियो सार्बजनिक ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
April 20, 2021 April 20, 2021 AdminLeaveaComment on भाइरल बालगायक सचिन परियारको नया म्युजिक भिडियो सार्बजनिक ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)
काठमाडौ । पछिल्लो केही समयदेखि अहिले सामाजिक सन्जाल र मिडियामा एउटै नाम चलिरहेको छ गुन्जीरहेको छ उतm नाम हो सचिन परियार । केही समय अगाडि लेकसाइड टिभी र ब्लुस्काई नेपालबाट भार्ईरल भएका गुल्मीका ९ बर्षिय सचिन परियार अहिले बिबादमा मुछिएका थिए उक्त बि’बाद थियो पारिबारिक जस्ले मिडियामा धेरै सनसनी पनि मच्चायो ।
जन्मदिने आमास“ग बस्ने नबस्ने र भेटने सम्मको कुराले काठमाडौ देखि धेरै मिडिया र सन्चार क्षेत्र पनि हल्लायो । उतm बिबाद अहिले बिस्तारै साम्य भएको छ, र आमाले पनि सचिन र बहिनीलाई भेटेर फर्किएकी छिन । यहि बिबादको अन्त्य लगतै अहिले सचिनको नया गित आएको छ हान्छु ढुंगाले जहा सचिनले दमदार अभिनय गरेका छन ।
बिरेन्द्र एसबी, अर्जुन कुवर र अश्मिता बुढाथोकीको आवाजमा रहेको उतm गित काठमाडौ मुडखु भन्ज्याङमा करन चैसिरले आकर्षक फ्रेममा खिचेका छन । गुरुआमा स्मृति तिमिल्सिनाको निर्देशन रहेको उतm गितलाई शिब पौडेलले सम्पादन गरेका हुन भने यसमा अभिनय नायिका एलिना रायमाझी, सचिन परियार, सबिन क्षेत्री चर्चित हास्यकलाकार अर्जुन कुवर पित्री बुढो र राज धोनीको रहेको छ ।
यस गितलाई सन्तोश पक्कुले लेखेका हुन भने दिनेश पौडेलको प्रस्तुती रहेको छ । यो गित सचिनको बि’बादपछिको पहिलो गित हो जुन लेकसाइड टिभी नामको युटयुुबबाट डिजिटल बजारमा आएको छ । भिडियो यहाँबाट हेर्नुहोस्ः